China 42 Hole Bi-Metal Hole nahita vy vita amin'ny vy, Ahoana no nahitana, Gypsum Board Plastika vy Hole Saw, Metal Wood drill, orinasa mpivarotra ary mpanamboatra | Boda
Hole bi-metal 42 hit'ny vy vita amin'ny vy, Ahoana ny fahitana, Gypsum Board Plastika vy Hole Saw, vy vita amin'ny hazo, fandavahana
BOSENDA M42 Bi-Metal Hole Opener / BI-Metal Hole Saw dia mitafy fanoherana mahery vaika amin'ny fiasana, miaraka amin'ny lelan-tsofoka maranitra sy fikosehana malama ary koa fandidiana mora. Mandritra ny fizotran'ny asa, ny nify maranitra sy ny hovitrovitra kely izay afaka mandanjalanja amin'ny fomba mahomby rehefa mihady lavaka ary mampiato ny fandidiana. Ny endrika vaovao amin'ny alàlan'ny fanesorana puce dia afaka manala ny famafazana vy haingana ary mahatonga ny asa ho milamina sy mora kokoa. Ny vokatra dia natao ho an'ny mpampiasa-namana.
BOSENDA Bi-Metal Hole Saws dia amidy eran'izao tontolo izao, miaraka amin'ireo mpanjifa avy any Etazonia, Kanada, Aostralia, Alemana, Grande-Bretagne, Espana ary ny firenena Eoropeana Eat toa an'i Georgia, Rosiana, ary amin'ireo firenena amerikana atsimo toa an'i Brazil, Mexico, Chile , Kolombia sy ny sisa, hatrany amin'ny firenena Afovoany Atsinanana toa an'i Irak, Dubai, Saudi, Qatar, Amen sns ...
Ny tsofa BOSENDA dia mankafy ny valin'ny tsena tsara ary mametraka ny baiko mahazatra ny mpanjifa. Ny kalitao sy ny faharetan'ny fiainana amin'ireo tsofa lavaka dia mankasitraka hevitra tsara foana. Ny tsofa BOSENDA dia azo ampiharina amin'ny fampiasana indostrialy, mahafeno fepetra amin'ny toeram-pananganana rehetra.
Ny Hole Saws miaraka amina borosy fanaovan-tsarimihetsika, izay napetraka tamin'ny marimarina kokoa, miaraka amin'ny vokany maranitra, ireo rehetra ireo dia manome traikefa momba ny mpampiasa sy fitehirizana asa mandritra ny fizotran'ny asa.
BOSENDA M42 Bi-Metal Hole Saws / Steel Hole Saws / Metal Drill misy habe amin'ny 14-300mm, fitaovana M42, mety amin'ny fanokafana lavaka amin'ny vy vy, fanariana, firaka alimina ary fittings fantsom-by hafa, takelaka plastika, karazan-kazo rehetra, birao gypsum sy fitaovana hafa.
Ny ranoka mangatsiaka ivelany dia tsara kokoa raha ampiana rehefa mandavaka ny metaly. Raha misy fijanonana ateraky ny fako mandritra ny fiasana dia ilaina ny mijanona aloha ny fandidiana ary avy eo manohy miasa aorian'ny famoahana ny fako.
Aza mampiasa hery be loatra rehefa manala sy mametaka visy. Rehefa mihady lavaka eo amin'ilay fitaovana misy hateviny mihoatra ny 10 mm dia ilaina ny manaisotra ny lohataona amin'ilay fandavahana miorina.
Mpanokatra lavaka bi-metaly / tsofa famandrihana / fantsom-baravarankely dia be mpampiasa amin'ny karazana boriborin'ny dabilio, milina fandavahana ary fandavahana tanana elektrika.
Ireto ny haben'ny vokatra:
Previous: Sitrana lavaka beton, bitsika fandavahana fototra, tsofa lavaka, tsofa lavaka amin'ny rindrina, fitrandrahana beton
Manaraka: Saw vita amin'ny seramika vita amin'ny diamondra, fandavahana vera, tsofa holw fitaratra, vatan-kazo fitaratra, tsofa lavaka seramika, tsofa lavaka marbra